Ukuphepha okuthengwe ngokweqile | Ezezimali Zomnotho
Okwamanje kukhona amanye amasheya athengwe ngokweqile. Lokhu ngokwenza kusho okuthile okulula njengokuhamba ngezikhathi ezimbalwa lapho amandla okuthenga emakhulu kakhulu khona ukuthi intengo iphinda ibuye iwele futhi. ukungatholi abathengi besikhathi esizayo. Nokuthi sekucacile ngemuva kwezimemezelo zemiphumela yebhizinisi yekota yesibili yalo nyaka nokuthi akuhlalanga lutho kahle ngokulinganiswa kwamasheya ngabahlaziyi bezimakethe zezimali. Ukufika ezingeni lokuthi bajeziswe ngaphakathi kwenkomba ekhethiwe yezimali zeSpain.
Ngakolunye uhlangothi, akunakulibaleka ukuthi I-Eurostoxx 50 indawo yayo yokuqala yokusekela ingamaphuzu we-3.600 futhi, njengokuhlosiwe, amaphuzu we-3.700. Esimweni lapho ezinye izibambiso zakhona zidayiswe kakhulu ngakho-ke zisengozini yokulahlekelwa yingxenye yenani lazo emakethe yamasheya. Babheja ngokutshalwa kwezimali okungathandeki kakhulu ukwenza izinqumo kusuka manje. Futhi njengomphumela walezi zenzo, kufanele sikhombe ukuthi yimaphi lawa magugu akhule kakhulu ezinyangeni ezedlule noma ngisho naseminyakeni edlule. Kumongo onzima kakhulu ukwenza iphothifoliyo yokutshala imali eqinile kakhulu ezinhlosweni zayo.
Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, kubaluleke kakhulu ukuhlola ukuthi kuliqiniso yini ukuthi ngemuva kwesasasa noma ukwethuka kokuqala, kuyinto ejwayelekile ukuthi inani lithole iconsi elizolithola phansi ukuze uncike. Kukuphi kokuhamba okuvame kakhulu kulokho okuthengwe ngokweqile. Okungukuthi, amazinga lapho izikhundla ezingenakuhlehliswa ukuthi zibuyele emuva kwesikhathi ngamanani aqinile futhi anokuncintisana angakhiqiza amandla amakhulu wokubuyekeza. Kusuka kunoma yiluphi uhlobo lwezikhundla namasu okutshala imali futhi ngenhloso eyodwa okungekho okunye ukwenza ukonga okunenzuzo ngeziqinisekiso ezinkulu zempumelelo ekusebenzeni.
1 Ukuphepha okuthengwe ngokweqile: Iberdrola
2 Iselula engaphezulu ikhule kakhulu
3 I-Nokia enokungabaza okujwayelekile
4 Inhloso ye-Ferrovial yezinkampani zokwakha
5 I-Acerinox esikhathini esifushane
Ukuphepha okuthengwe ngokweqile: Iberdrola
Uma okwamanje kunenani eligxile kulo mkhuba, lokho akuyona enye ngaphandle kwale nkampani kagesi. Kwenzeke ngesikhathi esifushane kakhulu kusuka ku-6 kuye ku-9 euros ngesabelo ngasinye nangokubuyekezwa cishe kwama-32%. Lapho kungaba yisikhathi sokuthatha inzuzo uye kokunye ukuphepha noma ezinye izimpahla zezezimali. Akumangalisi ukuthi isivele ikhombisa izimpawu zokuqala zobuthakathaka ezingaholela okokuqala emazingeni ama-8,50 euros. Kusuka lapho kungaya emazingeni anesizotha futhi ekuphenduleni ukukhuphuka okutholwe kuma-euro angu-18 adlule.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele kuphawulwe ukuthi i-Iberdrola icace ngokweqile ngokusobala futhi kufanele ivumelane nokuhlinzekwa nokufunwa kwamasheya ayo. Lesi sici singaholela ekuqaleni kokulungiswa okubalulekile okungakuthatha kwehle kakhulu kusuka ezikhundleni zamanje ekucushweni kwamanani akho. Njengokuthi iqiniso lokuthi ukuthengisa ingcindezi sekuqalile ukwakha nokuthi kungasetshenziswa ukuthenga amasheya ngamanani ashibhile. Kusuka kunoma yiluphi uhlobo lwecebo lokutshala imali futhi lokho kungashukumisela abatshalizimali ukuthi baphume ezikhundleni zale nkampani kagesi.
Iselula engaphezulu ikhule kakhulu
I-teleco yinani le-Ibex 35 elazise kakhulu kusukela ekuqaleni konyaka. Kuletha intshisekelo emisebenzini eyi- cishe 40%, iphesenti elincane kakhulu elitholakala ezinkampanini ezisohlwini lwenkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain. Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi kube sengozini enkulu ekulungisweni kwamanani okungenzeka, okungenani kusuka ku-50% ekunyuseni kwezinyanga ezisanda kwedlula. Ngoba ngeshwa, kungahle kube sekwephuze kancane ukungena ezikhundleni zabo kusuka manje. Ngaphandle kokuthi kuholele ekwenyukeni kwamanani akha i-Ibex 35.
Futhi kungakhishelwa ngaphandle ukuthi ingcindezi yokuthenga kumthengisi iyaqhubeka, noma kungenzeka kube nokubuyekeza okunemikhawulo eminingi kunangaphambili. Kulesi simo, akunqatshelwe ukuthi kuyashesha ukudonsa phezulu okuholela ekunciphiseni okukhulu kwamanani abo. Ngaphandle kwentshisekelo engavuswa yile nkampani yocingo phakathi kwabatshalizimali abancane nabaphakathi. Lapho okunye kokhiye kuzoba khona ukuthi kunganqoba ukumelana okubaluleke kakhulu inani elinakho ngaphambili futhi lokho kuzoba yindawo yesigameko ukuze izenzo zayo ziqondiswe kolunye uhlangothi noma kolunye ezinyangeni ezizayo.
I-Nokia enokungabaza okujwayelekile
Ngaphakathi kwaleli qembu elikhethiwe, abatshalizimali abakwazi ukulikhohlwa leli xabiso, noma selilahlekelwe ngamandla ngezikhathi zokuhweba zakamuva. Kunoma ikuphi, umnyango wokuhlaziya weBankinter ukhombisa ukuthi inkampani efakwe kuhlu ine- ukubonakala okuphezulu ekuthengiseni, ngezinga lokumbozwa elingu-90% ngaphezu kwebanga eliphakathi nendawo elihlosiwe lonyaka, kodwa lifanele unyaka njengokuthi "ushintsho" ngokwenzuzo. Ukuqinisekisa ukuthi ukungezwani kwezentengiselwano kungenye yezinto ezichaza ngokwengxenye ukwanda kwezindleko kuhla lokuthengiselana. Naphezu kwakho konke, kungukubamba kunokuthenga, noma kungenakukhohlakala ukuthi kungezinye zezindinganiso eziguquguqukayo kunkomba ekhethiwe yamasheya aseSpain.
Kunoma ikuphi, kungenye yeziphakamiso eziyinkimbinkimbi kakhulu ezimakethe zezimali zikazwelonke okufanele zisebenze. Leli qiniso lingenxa yokuthi ezikhathini eziningi isimo esishubile simbi ngokweqile ngokuhluka okuphawuleka kakhulu phakathi kwezintengo zayo eziphakeme nezincane. Futhi kuze kufike ezingeni lokufinyelela amazinga angaphezu kwama-5% noma izilinganiso eziphakeme kakhulu. Lokho ukusho ukuthi, kulungile kakhulu ekusebenzeni kokuhweba, kepha hhayi ukusetha ukushintshaniswa kokulondeka okungathathi cala esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside. Lapho ungathola khona imali eningi ngale mihlangano, kepha ngezizathu ezifanayo, shiya ama-euro amaningi ngemuva.
Inhloso ye-Ferrovial yezinkampani zokwakha
Phakathi kwezinkampani ezibalwe emkhakheni wezokwakha, lena yiyo egcina isimo sinyuka kakhulu, ikakhulukazi ezinyangeni ezisanda kwedlula. Ngokucindezela kokuthenga okusenhloko yabamele i-Ibex 35. Ngalo mqondo, isu lokutshala imali elingasetshenziswa kusukela manje kuqhubeke sisebenzise ukulungiswa ukuthatha izikhundla ngenani, ngisho nasezindleleni ezinolaka kakhulu. Ngoba amandla ayo wokubuyekeza angesinye seziphakamiso eziphakanyiswa kakhulu ezethulwe yi-Ibex 35 futhi kunoma ikuphi okunye okungaphezu kwalezo ezinikezwa izinkampani kulo mkhakha.
Esinye sezici ezifanele kakhulu zalesi siphakamiso sokutshalwa kwezimali kumasheya aseSpain ukuthi sikwazise ngaphansi kwamadijithi amabili selokhu kuqale unyaka. Ngokwenzuzo isabelo ngasinye esivelele kakhulu ngabahlaziyi abakhulu bezimakethe zezimali. Ngenxa yokuthi iveza imigqa ehlukahlukene kakhulu, kumamodeli ayo nasezindaweni lapho besayine khona izinkontileka zomsebenzi. Ngamafuphi, inketho enganikeli ngezingozi ezeqile ezinyangeni ezizayo, ikakhulukazi uma ihambisana nomkhuba omuhle ezimakethe zezimali. Ngaphandle kokunquma ukuthi ingafinyelela izilinganiso eziphakeme kakhulu kusukela manje kuqhubeke.
I-Acerinox esikhathini esifushane
Isikhundla somenzi wensimbi waseSpain sikhethekile ngandlela thile ngoba, yize ukuthambekela kwayo kungekuhle kangako, kungokwesikhashana. Ngamandla okukhuphula amanani ayo angaheha kakhulu kulindelwe abatshalizimali abancane nabaphakathi. Ngomqondo ojwayelekile wokuthi emasontweni ambalwa ingasondela emazingeni ayi-11 euros ngesabelo ngasinye okuyilapho inokumelana okuqinile khona. Kunoma ikuphi, lokhu akulona inani lokuba nalo isikhathi eside, kepha kunalokho kwenzelwa imisebenzi ethile futhi elawulwa kahle kakhulu ebusweni bokuthi kungenzeka yini ezimakethe zezimali.
Ngaphezu kwalokho, ngeke kulibaleke ukuthi kulo nyaka inyuse isivuno sayo sezabelo cishe cishe ingxenye yephesenti. Lokhu kusho ngokwenza ukuthi ungathola isikweletu esinqunyiwe nesiqinisekisiwe njalo ngonyaka nanoma yini eyenzekayo ezimakethe zezezimali. Yize ngaphandle kokufinyelela ezingeni lezinkampani zikagesi ezinikela ngenani lenzalo yalo mqondo osondele kakhulu ku-7%. Lapho kuyindlela yokusondela ekutshalweni kwemali kule nkampani kusuka kunqubo ebukhali kakhulu noma evikelayo kunakwamanye amanani we-Ibex 35. Komunye wemikhakha ejikelezayo kunayo yonke, okungukuthi, kusekelwe kulokho okulindelwe bakha emnothweni wamazwe omhlaba. Futhi ngenxa yalesi sizathu ziguquguquka kakhulu kunezinye, ikakhulukazi ezikhathini ezingezinhle kakhulu zalesi sigaba sezimpahla zezimali ezikhetheke kakhulu. Futhi leyo ngenye yezinhloso ekutshalweni kwemali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Ukuphepha okuthengwe ngokweqile